UGoogle uya kuqhubeka nokukhupha iinguqulelo zexabiso eliphantsi zePixel flagship | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UGoogle ubhengeze izolo IPixel 3a kunye nePixel 3a XL Usuku lwe-1 kulo nyaka weGoogle I / O. Zombini ezi zixhobo zizii-smartphones ezingabizi kakhulu ezikhutshwe nguGoogle ukusukela oko yaphosa umgca weNexus ngokuxhasa umgca wePixel kwiminyaka embalwa edlulileyo. Iindaba ezimnandi zezokuba abasayi kuba ngabokugqibela.
Ngokwengxelo ngu Police Police, Iifowuni zePixel 3a ayizizo izixhobo "zohlobo olunye". Isicwangciso sikaGoogle kukuqhubeka nokukhupha iinguqulelo ezifikelelekayo zee-smartphones zePixel "ngekamva elibonakalayo."
Akukho ngqinisiso okwangoku ukuba ezi terminals zexesha elizayo ziya kufumana isimamva 'a' ('Pixel 4a' kunye 'nePixel 5a', umzekelo), kodwa ziya kwenzeka. Ukuhamba kuya kuba luloyiso kuGoogle, ngendlela. Esikhundleni sokulinda unyaka wonke ngaphambi kokuba kukhutshwe ifowuni elandelayo yePixel, i-tech giant iya kuba nefowuni ezimbini eziphambili ngonyaka, ngaloo ndlela zigcine kwiindaba, apho isayinwa ngamanye amaxesha ihlala ilahleka.
IPixel 3a kunye nePixel 3a XL
Nangona kunjalo, kukho inkxalabo yokuba isigqibo sokumilisela iinguqulelo ezifikelelekayo zeflegi siza kuchaphazela ukuthengiswa kwezixhobo eziphambili okanye iiflegi. Xa ndinonikwa i Iinguqulelo ezifikelelekayo ziya kuba nezinye zeempawu eziphambili zeeflegi eziphambili, abantu banokuthatha isigqibo sokuzinza. Okwangoku, uGoogle akazukuyikhathalela oku ukuba nje iifowuni zabo ziyathengisa.
Sikwacinga ukuba umahluko phakathi kweefowuni ezimbini unokwandiswa, kodwa uGoogle uyakuyila oza kungena ezihlangwini kwiPixel 3a ngendlela eya kuthi ihlale ingcono kwiklasi yayo.
Ngolunye uhlobo, oku kuvela ukuba yinto elungileyo kubathengi, Iinguqulelo ezingabizi kakhulu kwiimodeli zentsebenzo ephezulu. Ukwahluka kuya kuhlala kuthakazelelwa, kwaye ukuba uGoogle ufuna ukutsala umdla ngakumbi, kuyakufuneka kugcinwe ireferensi enesitokhwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UGoogle uya kuqhubeka nokukhupha iinguqulelo zexabiso eliphantsi zePixel